Tsy ny taona vaovao no hanova ny fiainanao fa ny fomba fisainanao vaovao - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
Oufff! « Vita ihany iny taona 2019 enjana be iny » araka ny voalazan’ny olona etsy sy eroa. Oui, tena tsapa tokoa aloha fa betsaka no nikaikay tamin’iny taona iny. Kanefa ny mahagaga, tsy aiko ianareo raha mahatsikaritra an’izany fa isakin’ny otran’izao, taona vaovao ohatran’izao dia toa lasa fomba firesak’olona fôna ny hoe: « mafy be iny taona lasa iny, enjana iny taona iny ». De ny taona vaovao zany midika fiainam-baovao dia maniry soa sy ny tsara dikan’izay. Ny mampalahelo anefa na dia efa miova ny taona, dia mbola manaraka ihany ny histoire passée. Ka hoy aho aminao hoe:
Tsy ny taona vaovao 2020, tsy ny lamba tsara tafinao, tsy ny trano tsara vao nipetrahanao, tsy ny sipa tsara vô pezinao na mbandy bôgôsy vô niaraka taminao, tsy ny moto na vam vô novidinao no hanovanao ho olom-baovao fa ny fomba fisainanao. Tsy ny iray minitra lasa na 1 andro lasa no hanova ny fiainanao fa ny fomba fisainanao vaovao. « Taona vaovao, Saina vaovao, Ianao -vaovao ».
Ny eo ihany no eo
Raha tsy nanaraka anao tsony ny blem-nao tamin’ny 2019 dia mifalia fa andalan’ny hotafa ianao, andalan’ny ahazo vokatra tsara ianao. Fa raha toa ka mifanohitra amin’izay, mbola manaraka anao eny ihany ny blem isan-karazany dia fotoana tokony hiovanao izao mba hitanisa ny zavatra azonao tamin’ity taona ity ianao rehefa hifarana ny taona 2020. Misy mantsy ny olona maniry zavatra tsara amin’ny fiainany nefa tsy te hiala ny fazaran-dratsy, fahazarana izay efa hita fa tsy mitondra vokatra tsara. Raha te hanova ny fiainanao ianao, dia mila manova famindra. Esory ny toe-tsaina negatif ireny toy ny hamisavisa ny ratsy foana isakin’ny hanao zavatra. Aza fohazina intsony ny lasa fa aleo ny lasa omba ny lasa, ny present sy futur no mbanjino. Tsy afaka androso mihitsy ianao raha mbola misaina ny erreur talou reny. Aleo hoany zany.
Betsaka ny zavatra tiana horesahana fa lasa lava be lôtra ito fa azo atao tsara ny mifampiresaka mivanatana na via M.P. fa ny hamaranako azy dia izao:
Efa nanampy olona foana ianao hatramin’izay nanatanteraka ny reve-ny. Tour-nao izao manatanteraka ny anao, ny reve-nao. Fa ny fiainana mandalo ka tsy hainao hoe rahampitso ianao no hiala eto ambonin’ny tany. Ny manatanteraka ny reve aloha dia tsy mora raha tsy izany efa nanao dôl ny olona fa mila patience, mila perseverance fa ampanatanterahana an’io reve-nao io no ahatsapanao ny amamin’ny miaina. Hotsapanao fa kay tsy ny objectif hotratrarina no tena manan-danja fa ianao hiova ao antiny izay.
Bref, tsy ny taona vaovao zareo ny hanova ny fiainanareo fa ny toe-tsainareo vaovao, ianareo vaovao. Ka raha tianareo hiatsara ny fiaiananareo amin’ity 2020 ity, dia ovay ny saina, ovay ny fomba fijery zavatra. Aza variana mijery lafiratsin-javatra foana fa jereo ny lafy tsara. Manànà toe-tsaina POZITIVUS
Io zany dia izay vava avoakanao ihany no tanteraka aminao